Web Application | PRO-X Software Solution
✔️ Pro Clinic ရဲ့ အဓိက Features တွေက ဘာတွေလဲ။🔖 ဆေးဆိုင်၊ ဆေးခန်းများ အပြင် ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်သော အရောင်း၊ အဝယ် စနစ်🔖 စတိုးအလိုက် ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန် များကိုထိန်းချုပ်ခြင်း🔖 စတိုးများခွဲ၍ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း (ဆိုင်ခွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်)🔖 စတိုးတစ်ခုမှ တခြားစတိုးတစ်ခုသို့ ကုန်ပစ္စည်းများ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခြင်း🔖 အရောင်းစာရင်းများကို Back Date ဖြင့်...
Asia-Land Real Estate Management System
Asia-Land Real Estate အတွက် ရေးဆွဲပေးထားသော Web base system တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြံမြေများကို လိုအပ်ချိန်တွင် အချိန်ကုန် သက်သာစွာ ရှာဖွေနိုင်သည့် အပြင်၊ အချိန်မရွေး နေရာမရွေးကပါ ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်း အလိုက် လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲပေး ထားပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါကPhone : +95 977...
PRO POS&nbsp;တွင် Customer များ၏ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအရ Lifetime အသုံးပြုလိုသူများ၊ တချို့နေရာများတွင် Customized ပြုလုပ် လိုသူများ ရှိကြပါသည်။ ထိုအချက်များကို အဆင်ပြေစေရန်အတွက်&nbsp;🌟PRO POS Plus🌟&nbsp;ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။PRO POS Plus က PRO POS ထက် ဘာတွေ ပိုထူးခြားသွားမှာလဲ🚀Software Lifetime ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း (Software အတွက် Monthly/ Ye...
Queue System ကို များသောအားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းအများစုတွင် အသုံးပြုကြပါသည်။ (ဉပမာ − ဘဏ်လုပ်ငန်းများ နှင့် ဆေးရုံများတွင် အသုံးပြုများကြပါသည်)မိမိလုပ်ငန်းသို့ ရောက်လာသော Customer များသည် Token စက်မှ မိမိဆောင်ရွက်လိုသော ကိစ္စအတွက် Token နံပါတ် ထုတ်ယူပြီး စောင့်နေလိုက်ယုံပါပဲ။ Token နံပါတ် ခေါ်တဲ့အခါတွင် ဘယ် Counter သို့ လာရောက်ပါဆိုတာကိုက...
Visits : 4755
Visits : 4729
1 -6of ( 8 ) records